अदालतमा डिभोर्स गरेका गायक रामकृष्ण ढकाल श्रीमती र छोरी लिएर चितवन पुगेपछी…::Point Nepal
अदालतमा डिभोर्स गरेका गायक रामकृष्ण ढकाल श्रीमती र छोरी लिएर चितवन पुगेपछी…
काठमाडौं, रामकृष्ण ढकाल नेपालको एक प्रसिद्ध युवा गायक हुन्। विभिन्न रियालिटी सोका जजका रुपमा समेत प्रस्तुत हुने गरेका उनले आधुनिक, पप र फिल्मका सयौ गीतमा स्वर भरेका छन् ।यतिबेला गायक ढकाल र उनकी पत्नी निलम शाह ढकालबीच सम्बन्धविच्छेद भएको छ। यधपी उनीहरु विभिन्न कार्यक्रमहरुमा एकैसाथ देखिन्छन जसका कारण यो सम्बन्धविच्छेदका बारेमा कतिपय अन्योलता सृजना गरको पनि पाइन्छ। यधपी कानूनी रुपमा भने ढकाल र निलमले सम्बन्धविच्छेद गरेका छन् ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका श्रेष्तेदार आनन्द श्रेष्ठले ढकाल र निलमले कागजी रुपमा सम्बन्ध विच्छेद गरेको बताएका थिए । उनका अनुसार निलमले अंश नलिने गरी ढकाल र निलमको डिभोर्स भएको हो ।चितवनमा आयोजित हात्ती महोत्सवमा पनि गायक ढकाल, निलम शाह ढकाल र छोरी रानी ढकाल संगै देखिन्थे। कार्यक्रममा उनले ‘मन पराउने हजार भेटिन्छन्…’, ‘ओराली लागेको हरिणको चाल भयो…’, ‘पहाडको छुकछुके रेल…’ लगायतका गीतहरु गाए। ढकालले आफ्ना गीत सुनाउँदा शाह र छोरी पनि सँगै स्टेजमै थिए ।
केहि दिनअघि पनि काठमाण्डौको सोल्टी होटलमा आयोजित अ म्युजिकल जर्नी अफ रंजित गजमेर विथ आशा भोस्ले कार्यक्रममा ढकाल दम्पत्ती छोरी रानीको साथमा पुगेका थिए । कार्यक्रम अवधीभर उनीहरुको जुन खालको सामिप्यता देखिएको थियो, यसले कतै पनि उनीहरुको डिभोर्स भएको छ भन्ने भान हुदैनथ्यो ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालयका प्रमुख सञ्जेल कार्यकक्षमा नै कु,टिए…हेर्नुहोस ।
भ्र,ष्टाचार वि,रुद्धका अ,भियन्ता प्रे,म सञ्जेल का,र्यकक्ष मै य,सरी कु टिए…हेर्नुहोस् भिडियो सहित ।
प्रधानमन्त्री ज्यु दश अर्व खै ? किट किन्ने हो कार्पेट होईन’ भन्दै चितवनमा पनि सरकार वि’रूद्ध प्र’दर्शन…हेर्नुहोस् ।
Good news : को’रोना बाट आमा गु’माएका शि’शुमा देखिएन को’रोना…हेर्नुहोस् ।
Exclusive : बाँकेको क्वारेन्टिनमा मृ,त्यु भएका युवकमा देखियो को,रोना सं,क्रमण…हेर्नुहोस!
Good News : कालापानी लिपुलेक क्षे’त्र नजिकै स’शस्त्र प्र’हरीको ग’स्ती सुरु…हेर्नुहोस ।